Ny dingan'ny famolavolana silika vita amin'ny silipo dia mamokatra prototypes fanao sy faritra famokarana fampiasa farany ao anatin'ny 15 andro na latsaka. Mampiasa lasitra aliminioma izay manome fitaovana mahomby sy haingam-pandeha haingam-pandeha ary manome tahiry isan-karazany sy faharetan'ny fitaovana LSR.
Ahoana ny fomba fiasan'ny fingotra vita amin'ny silipo vita amin'ny rano?
Ny famolavolana LSR dia tsy mitovy amin'ny famolahana tsindrona thermoplastic noho ny fahalalahany. Toy ny fitaovana vita amin'ny aliminioma mahazatra, ny fitaovana mamolavola LSR dia namboarina tamin'ny alàlan'ny milina CNC mba hamoronana fitaovana hafanana avo lenta namboarina mba hahatohitra ny fizotry ny famolavolana LSR. Aorian'ny fikosoham-bary, ny fitaovana dia nohosorana tànana tamin'ny famaritana ny mpanjifa, izay mamela ny enina fenon'ny safidy farany vita farany.
Avy any, ny fitaovana vita dia ampidirina ao amin'ny milina fanefitra tsindrona manokana an'ny LSR izay natao mazava tsara ho an'ny fifehezana marina ny haben'ny tifitra mba hamokarana ireo faritra LSR izay mifanaraka indrindra. Ao amin'ny Protolabs, ny faritra LSR dia esorina amin'ny lasitra amin'ny tanana, satria ny tsindrona tsindrona dia mety hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny ampahany.
Ny fitaovana LSR dia misy silika mahazatra sy naoty manokana mba hifanaraka amin'ny fampiharana sy indostria isan-karazany toy ny fitsaboana, fiara ary jiro. Satria polymer thermosetting ny LSR, maharitra ny endriny miorina — raha vao apetraka dia tsy azo averina miempo toy ny thermoplastic. Rehefa vita ny fihazakazahana dia apetaka ny boaty (na ny santionany voalohany) ary halefa tsy ela taorian'izay.